Espace Maray : mikarakara vaky boky miaraka | NewsMada
Hafakely ! Toeram-pampianarana dihy, sehatra ifanakalozana momba ity zavakanto ity ary toeram-pamoronana kanto ny Espace Maray eny Androndrakely, tantanin’i Julie Iarisoa. Mivelatra amin’ny zavakanto hafa koa anefa ny foibe. Manaporofo izany, mikarakara vaky boky miaraka ity mpanakanto ity, rahampitso maraina.
Amin’io fotoana io, samy mitondra ny boky tiany hovakina ny tsirairay ary mifamotoana ao amin’ny Espace Maray. Mandritra ny ora iray, samy mamaky am-panginana ny bokiny. Aorian’izay, ho an’ireo tsy maika, miara-misotro dite. Misokatra ho an’ny rehetra ny hetsika ary tsy andoavam-bola.
Tsotra ny tanjona, ny hiala kely amin’ny mahazatra sy ny hisintahana ny rotoroto isan’andro. Eo koa anefa ny fihaonan’ny samy mpankafy mamaky boky. Heverin’ny mpikarakara fa sady ilaina amin’ny fanatevenam-pahalalana ny vaky boky no mampiala voly koa. Na toy inona aza mantsy ny fivoaran’ny teknolojia, mbola hafa ihany ny boky.
Amin’ity telo volana voalohany amin’ny taona ity, vinavinan’ny mpikarakara ny hanao izao hetsika izao isam-bolana.